Nhau - Iyo yekuvandudza tarisiro ye kraft bepa bhegi
Kraft bepa bhegi rakavakirwa pamuti pulp bepa, ruvara rwakakamurwa chena kraft bepa uye yero kraft bepa, inogona kushandisa PP zvinhu pabepa rine rukoko rwefirimu, isina mvura mhedzisiro, bhegi simba rinogona kuitwa zvinoenderana nevatengi zvinodiwa kune imwe kusvika akaturikidzana matanhatu, kudhinda uye bhegi kusangana. Kuvhura uye pasi nzira dzekuisa chisimbiso dzakakamurwa kuita kupisa chisimbiso, pepa chisimbiso uye pasi pegungwa
"Kraft bepa bhegi" ibhegi rakagadzirwa nezvinhu zvinoumbwa. Nekuda kweiyo isiri-chepfu, isina kunaka uye inodzivirira mamiriro ezve kugadzirwa kwezvinhu zve kraft bepa bhegi, "kraft bepa bhegi" chave chinozivikanwa pasi rese chigadzirwa chekuchengetedza nharaunda ichigutsa vanhu girini kudyiwa. Iyo "kraft bepa bhegi" inogona kuoneka kwese kwese munzvimbo huru dzezvitoro nezvitoro mumusha nekunze. Iye akafanana neane murwi mudiki, achiperekedza isu muhupenyu hwedu hwezuva nezuva uye achitibatsira isu kugoverana mutoro wehupenyu.
Huchenjeri hwakajairika uhwo vanhu vanogona kungotenga zvinhu zvakawandisa sezvavanogona kutakura pamwe nazvo zvakaputswa nekuuya kwekraft mapepa akasanganiswa mabhegi, ayo akamisa vatengi vazhinji kubva kunetseka pamusoro pezvavanogona kutakura zvichikanganisa mazuva avo ekutenga. Kana kuberekwa kweiyo kraft bepa rinosanganisa bhegi kwakasimudzira kuvandudzwa kweye rese indasitiri indasitiri, pamwe kumwe kuwedzeredza, asi zvirinani zvakaburitsa chiitiko kune iro bhizinesi, kureva kuti, mune yevatengi yekutenga ruzivo rave iro rakakura dhigirii rekusununguka, nyore, kugadzikana zvisati zvaitika, hazvigone kufungidzira kuti vatengi vachatenga zvinhu zvingani. Izvo chaizvo nekuda kweizvi, zvakakonzera kuti vanhu vepamberi vateerere kune vatengi mutengi ruzivo, uye vakasimudzira kuvandudzwa kwengoro yekutenga uye tswanda musupamaketi gare gare.
Mune inotevera hafu yezana ramakore, kuvandudzwa kwe kraft mapepa ekutenga mabhegi mune rombo rakanaka. Iko kuvandudzwa kwemhando yezvinhu kwakasimudzira huremu hwayo hwekutakura uye kwakaita kuti kutaridzika kwayo kuwedzere uye kunakidze. Vagadziri vakadhinda mhando dzese dzezviratidzo uye mapatani akajeka pamapepa mabhegi uye vakapinda muzvitoro nemashopu mumugwagwa wekutengesa. Kusvikira pakati pezana ramakore rechimakumi maviri, kubuda kwemabhegi epurasitiki ekutenga kwakave shanduko huru munhoroondo yemabhegi ekutenga. Plastiki yekutenga bhegi nekuda kwemutengo wayo wepasi, hwakasimba mhando, dzakaonda uye dzakareruka bhenefiti kamwe pasingagumi nzvimbo inoonekera kraft bepa remubatanidzwa bhegi yakakanda mumvuri Kubva ipapo, mapurasitiki akave sarudzo yekutanga yevanhu yehupenyu, bhandi remombe zvishoma nezvishoma "wechipiri mutsara". Chekupedzisira, kraft mapepa mabhegi anogona kungoshandiswa mune mashoma mashoma mabhuku, zvipfeko, uye vhidhiyo zvigadzirwa muzita re "zvakatipoteredza", "zvakasikwa" uye "nostalgic".
Post nguva: Jan-28-2021